मुटु कमाउने चिसोले जनजीवन कष्टकर « Lokpath
२०७७, २२ पुष बुधबार ०६:४९
मुटु कमाउने चिसोले जनजीवन कष्टकर
प्रकाशित मिति : २०७७, २२ पुष बुधबार ०६:४९
पोखरा । हिमाली जिल्ला मनाङको नार र फु (करिब ११ हजार फिट उचाइ) गाउँका बासिन्दा यतिबेला रातिको समयमा माइनस १५ डिग्रीको चिसो खेपिरहेका छन्। दिउँसोमा पनि माइनस ७ डिग्री हुन्छ त्यहाँको तापक्रम। घाम लाग्दा दिउँसोमा चिसो केही कम हुने भए पनि बिहानबेलुका घरबाहिर निस्कन मुस्किल पर्छ।
कोरोना कहर नहुँदो हो त यो बेला नार र फूका अधिकांश घर रित्तै हुन्थे। केही युवा मात्र गाउँमा हुन्थे। महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा सहर (पोखरा, काठमाडौं, बेंसीसहर) झरेका हुन्थे। तर कोरोनाले यो पटक ती गाउँले सहर झर्नबाट रोकिए। हिमपात भएपछि दुर्गम ती गाउँका बासिन्दा चिसोले आहत छन्।
मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरीङ लामा भन्छन, ‘मुटु कमाउने चिसो छ। सोमबारदेखि हिउँ पर्न थालेको छ। तापक्रम रातमा माइनस १५ र दिनमा माइनस ७ डिग्री हुन्छ।’ उनका अनुसार पोहोर–परार यो बेला धेरैजसो गाउँले जाडो छल्न सहर झरिसकेका हुन्थे। घर कुरेर बसेका सीमित व्यक्तिमात्र गाउँमा भेटिन्थे तर अहिले कोरोनाले गर्दा अधिकांश बासिन्दा गाउँमै रोकिएको उनले बताए। ‘बाहिरबाट हेर्दा त अरू समस्या केही छैन। दाउराको आगो ताप्ने, रासन खाने र बस्ने गरेको देखिन्छ। तर, हिँडडुल सकसपूर्ण छ। घरबाट बाहिर निस्कन पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै ५/६ इन्चसम्म हिउँ जमेको छ। योभन्दा बढी पर्‍यो भने त कठिन हुन्छ।’ चिसो अधिक हुँदा गाउँमा खानेपानीको अप्ठेरो परेको लामाले सुनाए। ‘सबैतिर पानी जमेको छ।
पानी जमेपछि टाढाको खोलामा गएर मात्र पानी ल्याउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘धारामा पानी आउन छाडेको लामो समय भइसक्यो।’ जाडो छल्न सहर झर्न नपाउँदा यो पटक सबैलाई सकसपूर्ण अवस्था आएको उनले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
कोभ्याक्सको खोप चार महिनापछि मात्र आउने
काठमाडौँ । कोरोनाविरुद्ध कोभ्याक्सले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको खोप आगामी वैशाख/जेठमा मात्र आइपुग्ने
परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई किन महत्व दिएन भारतले ?
काठमाडौँ । सीमा विवादका कारण करिब एक वर्षदेखिको संवादहीनताको अवस्थामा रहेका दुई छिमेकीबीच
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, अब कुनको कति पुग्यो ?
देउवा र पौडेलबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, के भयो कुराकानी…
कोरोना अपडेट: ३२२ जना संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ?
सोल्टी सिटी अपार्टमेन्टमा लागेको आगो नियन्त्रणमा, घाईतेको उपचार हुँदै
भिडियो, राजनीति, समाचार, समाज
एकातिर प्रचण्डको लाठी खाने मनशाय, अर्कोतिर निर्वाचन: के छ प्रहरीको…
भगवान शिवको उपासना गर्दा नचढाउनू यी कुरा, मन्दिरमा